နို့တိုက်မေမေနဲ့ တုပ်ကွေး ...................... - Hello Sayarwon
ပုံမှန်ချိန်မှာ ဖျားတာ၊ တုပ်ကွေး ဖြစ်တာ၊ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ တစ်ခုခုကို ခံစားရတာက ကြီးကြီးမားမား ပြဿနာ မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်၊ ဘေဘီလေးကို နို့ချိုတိုက်ကျွေးနေချိန်မှာ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ တစ်ခုခုကို ခံစားရတာက အတော်လေး ခက်ခဲပါတယ်။
စဉ်းစားစရာတွေကလည်း အများကြီးပါ။ ဆေးသောက်ဖို့ကစလို့ ဘေဘီလေးကို နို့ချိုတိုက်ကျွေးလို့ ဖြစ်ပါ့မလားအထိ စဉ်းစားစရာတွေက အစုံပါပဲ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ရာသီအကူးအပြောင်းမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ တုပ်ကွေး ဖြစ်တဲ့အခါ နို့တိုက်မေမေအနေနဲ့ ဘေဘီလေးကို မိခင်နို့ ဆက်တိုက်လို့ ဖြစ်ပါ့မလားလို့ စိတ်ပူနေတဲ့ ကိစ္စလေးကို အဖြေထုတ်ပေးချင်ပါတယ်။
တုပ်ကွေးက ပြင်းထန်ပြီး ကူးစက်လွယ်တဲ့ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါ တစ်မျိုးပါ။ တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ တစ်ရပ်ပါ။ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းတို့ကနေတဆင့် အဆုတ်ထဲကို ဝင်ရောက် ကူးစက်ပါတယ်။
တုပ်ကွေးက သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေကနေ ပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေတွေအထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန် ဖျားနာတာလောက်ကနေ သေဆုံးသည်အထိ ပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။
တုပ်ကွေးက အသက်အရွယ်တိုင်းမှာ ကူးစက်နိုင်ပေမယ့် ကလေးငယ်လေးတွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ၊ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သူတွေ၊ ရောဂါ အခံရှိသူတွေမှာ ကူးစက်နိုင်ခြေ ပိုများပြီး ပိုလည်း ပြင်းထန်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ခံစားရနိုင်ခြေလည်း ပိုများပါတယ်။
နို့တိုက်မေမေ တုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့အခါ နို့ဆက်တိုက်လို့ ရပါ့မလား ….
နို့တိုက်မေမေ တုပ်ကွေး ဖြစ်တဲ့အခါ ဘေဘီလေးကို မိခင်နို့ ဆက်တိုက်ပါ။ တုပ်ကွေး သက်သာစေဖို့ ဆေးတွေ သောက်နေရင်တောင်မှ နို့ချိုကို ဆက်တိုက်ပေးပါ။
ဒီလို တိုက်ပေးတာက ဘေဘီလေးကို ထိခိုက်မှု မရှိစေပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ မိခင်နို့ဆိုတာက ဘေဘီလေး ကျန်းမာစေဖို့ သီးသန့်ဖန်တီးထားတဲ့ သဘာဝ လက်ဆောင် တစ်ခုမို့ပါ။
မိခင်နို့က ဘေဘီလေးကို ကူးစက်ရောဂါတွေကို တိုက်ထုတ်နိုင်မယ့် antibodies တွေကို ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် မေမေက တုပ်ကွေး ဖြစ်နေရင်တောင် ဘေဘီလေးကို မိခင်နို့ ဆက်တိုက်ပါ။
မိခင်နို့ကနေတဆင့် တုပ်ကွေး ကူးနိုင်လား ……
မကူးစက်နိုင်ပါဘူး။ တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်က မိခင်နို့ကနေ ကူးစက်တာမျိုး မရှိပါဘူး။ တုပ်ကွေးက လူတစ်ယောက်ကနေ တစ်ယောက်ဆီကို အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းကနေပဲ ကူးစက်ပါတယ်။
နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးတာတွေကနေပေါ့။ ရောဂါပိုး ရှိတဲ့ အရာတွေ၊ မျက်နှာပြင်တွေကို ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ပြီး ပါးစပ်၊ နှာခေါင်း၊ မျက်လုံးတွေကို ထိတွေ့မိတာမျိုးပေါ့။
မေမေ့ဆီက တုပ်ကွေး မကူးစက်စေဖို့ ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ ….
နို့တိုက်မေမေဆီကနေ ဘေဘီလေးဆီကို တုပ်ကွေး ဗိုင်းရပ်စ် မကူးစက်စေဖို့ဆိုရင်
လက်ကို မကြာခဏ ရေနဲ့ ဆပ်ပြာ သုံးပြီး ဆေးကြောပါ။ အထူးသဖြင့် ဘေဘီလေးကို မချီခင်၊ ဘေဘီလေးရဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကို မထိတွေ့ခင်မှာပါ။
နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးတဲ့အခါ ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းကိုအုပ်ထားပါ။
ဘေဘီလေးနဲ့ မျက်နှာချင်း နီးနီးကပ်ကပ် ထိတွေ့တာမျိုး ရှောင်ပါ။
ဘေဘီလေးကို နို့ချိုတိုက်နေစဉ်မှာ မတ်ခ် တပ်ထားပါ။
အရမ်းဖျားနေမယ်ဆိုရင် ဘေဘီလေးကို မိခင်နို့ ညှစ်ထုတ်ပြီး နေကောင်းနေတဲ့ သူတစ်ဦးဦးကို ဗူးနဲ့ တိုက်ခိုင်းတာမျိုး လုပ်ပါ။
ဘေဘီလေးက ၆ လ ပြည့်ပြီးပြီဆိုရင် တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးပါ။
မေမေကိုယ်တိုင်လည်း တစ်နှစ်ကို တစ်ကြိမ် တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေး ထိုးပါ။
ကဲ …. နို့တိုက်မေမေနဲ့ တုပ်ကွေး အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိချင်နေတာတွေ သိလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ မေမေရော ဘေဘီလေးတွေပါ တုပ်ကွေးကင်းဝေးပြီး ကျန်းမာကြပါစေကြောင်း ………
Influenza (Flu) https://www.cdc.gov/breastfeeding/breastfeeding-special-circumstances/maternal-or-infant-illnesses/influenza.html Accessed Date 29 October 2021
Is it Safe to Breastfeed if I Have the Flu? https://kidshealth.org/en/parents/flu-breastfeeding.html Accessed Date 29 October 2021